Moya China Ukwandiswa Rubber Joins umzi-mveliso kunye nababoneleli |Arex
Nokuba kukwakhiwa kweenqanawa, kubunjineli beenkonzo zokwakha, kushishino lwe-oyile yezimbiwa okanye koomatshini, iplanti kunye nolwakhiwo lwesikhululo samandla - iimveliso ze-elastomer ezenziwe yinkampani yethu zijolise ekunciphiseni uxinzelelo, ukwahlula ingxolo kunye nokungcangcazela, ukufunxa ukwanda kwe-thermal okanye ukuthomalalisa kwesakhiwo kunye nokubuyekeza ukungahambi kakuhle ngexesha. ukufakela.Siphuhlisa iimveliso kuluhlu olubanzi lwezicelo ezahlukeneyo.
I-Rubber Expansion Joints zingumdibaniso oguquguqukayo owenziwe kwi-elastomers yendalo okanye yokwenziwa kunye namalaphu aneziqinisekiso zetsimbi ezenzelwe ukunika isiqabu soxinzelelo kwiinkqubo zemibhobho ngenxa yokutshintsha kwe-thermal.
Xa ukuguquguquka kwale ntshukumo kungenakuyilwa kwisistim sombhobho ngokwawo, i-joint yokwandisa isisombululo esifanelekileyo.Amalungu okwandisa irabha ahlawulela iintshukumo ezisecaleni, ezijikelezayo kunye nee-angular ezithintela umonakalo kunye nexesha elingafanelekanga lemisebenzi yezityalo.
Uluhlu ukusuka kwi-ND32 ukuya kwi-ND600.Umzimba omnye we-EPDM/NBR, sinokwenza ubungakanani obulungiselelweyo njengemfuno yabathengi.
Ukuqiniswa kwangaphakathi Inayiloni kunye namakhonkco entsimbi.
Yenzelwe ukufunxa iintshukumo zokwandisa, ukungcangcazela kwimibhobho yokuqhuba ulwelo.
Ukwakhiwa kwamaza odwa kunye nokulahleka komthwalo ophantsi.
Ifunxa isandi kwaye ihlukanise iintshukumo kulo naliphi na icala.Akukho mfuneko yokuhlanganisana.
Ukwakhiwa okukhethekileyo kwamalungu erubha kunokusombulula iingxaki ezifana
Ukungcangcazela, Ingxolo, Ukothuka, ukuMdla, ukuArhawuka.
Uxinzelelo, Uxinzelelo lomthwalo, ukuHamba kweZixhobo.
Ukungcangcazela, ukuNyulwa koxinzelelo kunye nokuhamba kwiNkqubo yokuBopha.
Ukufudumeza, ukupholisa umoya, ukupholisa amanzi ashushu kakhulu, iinkqubo zamanzi, impompo.
izikhululo, uqhagamshelo lweecompressor, umzi-mveliso & nofakelo lweenqanawa.
Ngaphambili: Ukuqhaqha Amalungu
Okulandelayo: Nxiba iiPads ezixhathisayo
I-Double Sphere Rubber Expansion Joint
Epdm Rubber Ukwandiswa Joint
I-Flanged Rubber Expansion Joint
I-Rubber Expansion Joint
Irabha yoKwandiswa koMgangatho oManyeneyo
© Copyright 20102021 : Onke Amalungelo Agciniwe.> 50mm Flexible Rubber Hose ISeismic Expansion Joint Metallic Ukwandiswa Joint Isilayidi seValve yesibaso Ivalufa yokulawula umoya Umnatha wesikrini Zonke iimveliso